> Resource > Ladnaansho > awr Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Device awr Kaydinta
Sidee baan ka awr External Hard Drive soo kaban karto, Files?
Waxaan leeyahay 500GB iyo awr lagu xasuusta dibadda iyo si lama filaan ah markaan isku dayey inaan si aad u furto, kombiyuutarka ii sheegay in aan si aad u qaab. Dhibaatada waxa ay tahay, anigu ma waxa ay haatan qaab karo sababtoo ah waxaan leenahay badan oo files shaqo muhiim u ah oo ku saabsan. Su'aashaydu waa sida aan soo kaban karto, files ka awr drive dibadda adag oo aan formatting?
Tani si dhab ah ma aha su'aal adag. "Qalab lagu kaydiyo wuxuu u baahan yahay in la formatted" waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee kaydinta iyo awr lagu khasaaro xogta qalab. Waxaad go'aansan kartaa oo keliya in ay qaab si ay u sameeyaan si caadi ah dib. Laakiin ka hor inta this, aad fursad weyn oo ay ku heli faylasha aad u dhabarka aad.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa awr qalab kabashada xog wax ku ool ah oo khatar la'aan u saamaxaya in aad ka bogsato xogta ka qalab kaydinta iyo awr, oo ay ku jiraan awr drive adag la qaadi karo, iyo awr flash USB drive iyo awr lagu SSD. Waa wax tar leh marka xogta lumay, tirtiray, formatted iyo xitaa laga qalab kaydinta iyo awr. Habkaani wuxuu ku soo kabashada awood badan ee barnaamijkan u saamaxaaya in aad dib u soo ceshano nooc oo dhan file, oo ay ku jiraan waraaqaha, sawirada, files audio, videos iyo in ka badan.
Waxaad ka heli kartaa version a free maxkamad barnaamijkan inuu ka soo kabsado xogta ka qalab kaydinta iyo awr hadda!
Samaynta iyo awr Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Haatan waxaan u socdaa si loo farsameeyo soo kabashada la Wondershare Data Recovery ee kombiyuutarada Windows. Users Mac samayn kartaa dib u soo kabashada ee talaabooyin la mid ah la Mac version of barnaamijka.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan soo kabashada xogta iyo awr
Sida image hoos ku soo bandhigay, waxaad leedahay 3 kabashada hababka uu ka soo xusho ka dib markii ay barnaamijka.
Inuu ka soo kabsado tirtiray, formatted ama kharribeen files ka qalab kaydinta iyo awr, oo aad qaadi karto "lumay Recovery File" sida isku day ah oo hore.
Tallaabada 2 baarista qalab kaydinta iyo awr
In tallaabadaas, waxaad dooran kartaa qalab kaydinta iyo lugtaada lana weeraray on "Start" button furmo si ay u bilaabaan u baar.
Haddii files ayaa laga badiyay ka qalab kaydinta iyo awr formatted, raalli firfircoon "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka qalab kaydinta iyo awr
Files helay qalab kaydinta iyo awr lagu soo bandhigi doonaa "Nooca File" ama "Jidka". Waxaad ka eegi kartaa sida files badan lumay ku saabsan qalabka lagu keydiyo iyo awr la raadsan karaan magacyo asalka file.
Markaas waxaad dooran kartaa faylasha aad u baahan tahay in ay dib u hanato oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u badbaadin on your computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo files soo kabsaday si aad qalab kaydinta iyo awr si degdeg ah ka dib markii hanaanka soo kabashada si looga fogaado in xogta overwritten.